DegDeg: Dooddihii Musharraxiinta 17-ka Iyo 18-ka Bisha u Mudaysna Oo La Joojiyay - Wargane News
Home Somali News DegDeg: Dooddihii Musharraxiinta 17-ka Iyo 18-ka Bisha u Mudaysna Oo La Joojiyay
Dooddihii musharraxiinta madaxtinimada Somaliland ee qorshaysna in ay habeen caawa 17-10-2017 iyo habeen dambe 18-10-2017 qabsoomaan ayaa gabi ahaanba la joojiyay. Doodahan waxa kala waday telefishannada madaxa bannaan ee Somaliland oo ay taageerayso Akademiyadda Nabadda iyo urur la baxay Inspiring group oo ay dhallinyaro ku midawday.
Xogaha arrintan ay ka heshay Sayruuqnews ayaa sheegaya in dhinacyada kala waday dooddan iyo musharraxiinta madaxtooda xalay lagu kulansiiyay qasriga Madaxtooyada kadibna la iskula qaatay in dood midaysan la qabto lana joojiyo dooddahan is barbar yaaca ah. doodda midaysan ayaan wali la shaacin xilliga la qabanayo in kasta oo wararku tibaaxayaan 19-ka bishan.
Sayruuqnews ayaa hore faallo uga qortay dooddahan is barbar yaacaya soona bandhigtay khaladaadka ku jira. Bulshada Somaliland oo fursad u heli lahayd dooddii u horaysay ee musharraxiin loo qabto ayaa si weyn caawa u sugayay in ay si toos ah uga daawadaan dhawr iyo toban telefishan.
Xigasho: Sayruuq News
Doorashadda Somaliland ee 2017
Somaliland: Ahmed-darajo is new city chief executive